Daawo Sawirada:- Shabaab oo soo Bandhigay Ciidamo Cusub oo Bulshada Koontaroosha - Hablaha Media Network
Daawo Sawirada:- Shabaab oo soo Bandhigay Ciidamo Cusub oo Bulshada Koontaroosha
HMN:- Ururka Al-shabaab ayaa soo bandhigtay ciidamo cusub oo ay sheegaan in ay ka howlgali doonaan degaanada ay ka taliyaan ee ku yaala gobolada Jubooyinka.
Ciidankan ayaan la sheegay inaysan isticmaali doonin wax hub ah, balse waxaa lagu garan doonaa inay sitaan dareys u gaar ah iyo gaadiid magacooda lagu qoray oo ay ku howlgalaan.
Al-shabaab ayaa sheegtay in ciidamadani laga howlgeliyey markii ugu horeysay degmada Jilib ee gobolka Jubada dhexe, waxayna intaa ku dareen in ciidamadan ay yihiin kuwo Xisbo ah oo ku shaqeynaya nidaam ka duwan kuwii hore.
Ciidankan ayaa la sheegayaa in loogu talo galay inay dadka wanaaga faraan xumahana ka reebaan, xumaanta ay ka reebaan, gaar ahaan qaladaadka yar yar ee ay samaynayaan dadka suuqyada ku sugan.
Waxaa sidoo kale la sheegay in ciidankani ay kontrolayaan tayada cuntada suuqa taalla iyo daawooyinka, dharka iyo dhammaan badeecadahada suuqyada lagu iibinayo, waxa ayna wataan qalab ay ka mid yihiin kuwa wax lagu cabiro, sida miisaan iyo kan cabirka dharka.